क्लबलाई सबथोक दिएका मेस्सीलाई बार्सिलोनाले धोका दियो - नेपालबहस
क्लबलाई सबथोक दिएका मेस्सीलाई बार्सिलोनाले धोका दियो
| १३:५१:१८ मा प्रकाशित
१ असोज, एजेन्सी । वर्तमान पुस्ताकै उत्कृष्ट फुटबलर लियोनल मेस्सीलाई बार्सिलोनालाई धोका दिएको आरोप लागेको छ । स्पेनिस क्लब रायो भाल्लेकानोका पूर्वप्रशिक्षक पाको जेमेजले मेस्सीमाथि बार्सिलोनाले धोका दिएको बताएका हुन् ।
अर्जेन्टिनी स्टार मेस्सीले गत २५ अगस्टमा क्लब छोड्ने घोषणा गरेका थिए । तर, मेस्सीसँगको सम्झौता आगामी सिजनमा मात्र सकिने भएका कारण उनलाई अन्य क्लबले किन्न ७०० मिलियन युरो तिर्नुपर्ने कारण देखाउँदै उनलाई क्लब छाड्न रोकेको थियो ।
बार्सिलोनाले ७०० मिलियन युरोको रिलिज क्लज कायम रहेको जनाएपछि मेस्सीले क्याप नोउ छोड्न पाएनन् । जसकारण क्लब छोड्ने घोषणा गरेको ११ दिनपछि मेस्सी क्पाप नोउमै बस्ने बाध्य भए ।
सर्वाधिक ६ पटकका बालोन डी‘ओर विजेता मेस्सीको क्लब छोड्ने इच्छा पूरा नगरेर बार्सिलोनाले उनलाई धोका दिएको जेमेजको आरोप छ । मेस्सी अहिले बार्सिलोनाको नियमित प्रशिक्षणमा फर्किदै खेल समेत खेलिरहेका छन् । प्रिसिजनमा उनले बार्सिलोनाका लागि गोल समेत गरिरहेका छन् ।
ग्रिजमेन र डेम्बेलेको गोलमा बार्सिलोना विजयी २ महिना पहिले
मेस्सीलाई अब बार्सिलोनामा ठाउँ छैन ! २ महिना पहिले
मेस्सीको गोलमा अर्जेन्टिनाको जित ४ महिना पहिले
आधुनिक फूटबलको राजधानीमा एक्लिएका राजा ! ४ महिना पहिले
बार्सिलोनामा नयाँ मेस्सी बन्दै अंशु फाती ४ महिना पहिले
एक्लिए मेस्सी, स्वारेज एट्लेटिको मड्रिडमा ! ४ महिना पहिले
एक करोडको लागतमा सोलार सिँचाइ सञ्चालनमा २३ घण्टा पहिले
बिना शल्यक्रिया मुटुरोगको नेपालमै उपचार १९ घण्टा पहिले
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा कांग्रेस २२ घण्टा पहिले
लघुवित्तले पायो ४ करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति १९ घण्टा पहिले
हाइड्रोपावर कम्पनीले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति ७ दिन पहिले
योगिनी कप अन्तर क्लब पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने ३ दिन पहिले
बुबाले गरे आफ्नै छोरीको डोरीले घाँटी थिचेर हत्या ! २ दिन पहिले
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ पौष २६ गते आईतबारदेखि माघ ०३ गते शनिबारसम्म ] ३ हप्ता पहिले
भारतीयले गल्ती स्वीकार गर्दै दशगजाबाटअस्थायी पोष्ट हटायाे ३ हप्ता पहिले
ट्रकको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
संघीयता खारेज गर्ने दाउमा ओली ४ हप्ता पहिले
क्षण भङ्गुरता २ दिन पहिले
ज्ञानेन्द्रजस्तै गरी केपी ओलीको पनि बिदा गर्छौ : मीनेन्द्र रिजाल ३ हप्ता पहिले
पुल निर्माणमा खटिएका कामदारले पाएनन ज्याला ४ दिन पहिले
एकताको बलमै चुनौती छिचोलिएको हो : मुख्यमन्त्री पौडेल ५ महिना पहिले
निगमको वाई १२ जहाज धावनमार्गमा चिप्लियो १० महिना पहिले
प्रसूति भत्तामा अनियमितता,भत्ता नपाएपछि स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति गराउने घट्दै ११ महिना पहिले
जाजरकोट पहिरोमा मृत्यु भएका १० जनाको सामुहिक अन्त्येष्टि ! ७ महिना पहिले